Ga - agụ Ozi Ọ bụla Ọ bụrụ na M ... | Martech Zone
Ga-agụ Ọ bụla Post Ọ bụrụ na M…
Wenezdee, Jenụwarị 23, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Onye isi m goro ọrụ nwa oge iji mepụta nnweta ahịa anyị chọrọ mgbe anyị wepụtara weebụsaịtị azụmaahịa ọhụrụ anyị. Onye ahụ goro ọrụ nwere ezigbo azụmaahịa mana ọ bụghị azụmaahịa azụmaahịa weebụ - enwere m obi ike na ha ga-enwe ike iburu ya ngwa ngwa (Atụrụ m anya!).
Inye ụfọdụ ntụzịaka, enyela m onye ndebanye ederede ụfọdụ nnukwu akụ na ide ọdịnaya. Otu n'ime akụrụngwa bụ Junta42's Top Content Marketing Blogs. Achọpụtaghị m blọọgụ niile na ndepụta ahụ mana o nwere ụfọdụ ịtụkwasị obi nyere na achọtara m DetuoBlogger n'ebe ahụ! Aga m achọ saịtị ndị ọzọ n'oge na-adịghị anya.
Ndụmọdụ maka idetuo Detuo maka saịtị ma ọ bụ Blog gị:
N’etughi ogha n’iru, lee uzo di elu banyere ide ederede. Ekwesịrị m ịmalite site n'ikwu na ikpe mara m nke anaghị eji ha rụọ ọrụ na blọgụ m niile. Olileanya ị ga-arụ ọrụ ka mma karịa m nwere. Gị ga- enweta ụgwọ ọrụ!
Na-adọrọ mmasị n'isiokwu - ịhọrọ isi akụkọ na-adịghị ka akwụkwọ akụkọ mana, kama nke ahụ, ọ kachasị ndị na-agụ akwụkwọ mmasị ka ha na-awụlị site na nsonaazụ njin ọchụchọ ma na-ebelata faili RSS ha.
Chunking Afọ - ebe ọcha bụ enyi anyị. Iji mee ka mpempe akwụkwọ gị nwee ike ịgụta… ma ọ bụ skimmable… zere paragraf ị mụtara ide na kọleji. Kama, h or o isi okwu ma obu isiokwu nta, nke paragraf nke 1 ma obu ah ir iokwu di ike. Ahu nagide akwụkwọ ma ọ bụ ọnụ ndepụta.
Jikọọ na mmesapụ aka - jikọọ na nke aka gị jiri isiokwu ndị ga - eme njem. Jikọọ na mpụga, na-akwalite blọọgụ ndị ọzọ ga-akwụ gị ụgwọ ụbọchị ụfọdụ. Nke a na - eme ka ndenye ihe nchọta ihe gị sie ike, na - enyere aka idobe ndị ọbịa na saịtị gị ogologo, ma na - akwalite blọọgụ ndị ọzọ - na-ekpughere ndị na-ege gị ntị na nke ha na nke ọzọ.
Jiri Keywords na Key nkebi ahịrịokwu - understandingghọta ihe ndị mmadụ na-achọ na web bụ isi iji ghọta otu esi enweta saịtị gị site na engines ọchụchọ. Iji Keywords na nkebi ahịrịokwu igodo na ọdịnaya gị niile ga - enyere aka ịbugharị ọdịnaya ahụ na igwe nchọta ma weta ndị mmadụ na saịtị gị nke na - achọ ihe ị nyere.
KPỌỌ peeji bụ peeji ọdịda - Ndị na-ere ahịa weebụ na-ekwukarị banyere ọdịda peeji ma a na-achọpụta ha dịka ebe ị na-eduzi onye ọbịa na ozi-e ma ọ bụ nkwalite. Agbanyeghị, ebe ọ bụ na ọdịnaya websaịtị gị ma ọ bụ nke blọọgụ gị bụ (olile anya) n'otu n'otu edepụtara yana injin nchọta, nke a pụtara na ibe ọ bụla edepụtara iche iche na-aghọ peeji ọdịda! Nke ahụ kwuru, ọ dị mkpa ka ị na-emeso ibe ọ bụla dị ka a ga - asị na onye na - agụ ya agabeghị na saịtị gị na mbụ. Karịsịa na blog! Ihe na-erughị 10% nke ndị ọbịa ọhụrụ m na-abanye na blọọgụ m na ibe m.
N'afọ gara aga, edere m, Kwụsị Ide maka Engines Nchọgharị. Ọ bụ mkpebi siri ike megide ide ọdịnaya gị naanị maka ịdọta igwe na-achọ ihe n'ihi na ọ ga-agbanyụ ndị na-agụ ya. Eguzo m n’akụkụ ebe ahụ; agbanyeghị, ekwenyere m na enwere nguzozi mgbe ị na-ede ọdịnaya gị.
Ọ bụrụ n’ị nwere ike ide ọdịnaya gị ka ndị na - agụ ya nwee ike ịchọta ya, kporie ndụ ya, ma dọta uche na igwe nchọta ihe ị chọpụtala.
Tags: adadvertisementọkọlọtọ adchrisbrossimewe adndị webmasters googlenhazi weebụnjikarịcha weebụsaịtịnjikarịcha weebụsaịtịatụmatụ weebụsaịtị
Ka m na Tweet na Twitter na Snitter…
onye na -eme weebụ
Jenụwarị 27, 2008 na 10:51 PM
Daalụ maka ndụmọdụ ndị ahụ,
Ọbụna echetụdịghị m ịgwọ peeji ọ bụla dịka ọ bụ ihuakwụkwọ.
Na-eme ka amata na ọ bụghị mmadụ niile na-abanye site na peeji nke ụlọ.